Abaphosi bazimisele ngobunzima ngosuku lokugcina
Abaphosela amaStandard Bank Proteas bazimisele ngosuku olunzima uma bebheke ukunqoba ngosuku lokugcina lomdlalo weSunfoil Test bedlala neSri Lanka eSt. George’s Park ePort Elizabeth. Ibhola lesibili elisha lingukhiye kulama-wickets amahlanu asele, kwi-pitch esilula ukushaya kuyona ngokuhamba komdlalo.
I-left arm spinner, uKeshav Maharaj, uwubambe kahle umdlalo ngokuthola u-2/84 kumdlalo wakhe weTest wesithathu, futhi uthemba ukuqhubeka ngokusekela kumdlalo ophethwe ama-seamers.
“Sikhulume ngakho kamuvana, angeke kube lula, i-pitch isingcono manje,” esho emuva komdlalo. “Sithe kungcono sigxile futhi sizame, mina ngifuna ukusekela abaphosa ngokushesha, kwi-innings yokuqala badlale indima enkulu. Ngifuna ukuqhubeka nokujwayelekile futhi ngizame ukuthola ama-lengths, ngithemba ukuthi i-pitch ingangisiza ngalokho. ”
“I-pitch isingcono ngokuhamba kwezinsuku,” esho eqhubeka. “Ibhola selithambhile, okwenza kube nzima ukuphosa. Ngebhola elidala sizamile futhi sithemba ukuthi ngebhola elisha, singavula indlela kusasa ekuseni.”
Umdlalo usencupheni njengoba ukapteni weSri Lanka, uAngelo Mathews (58 not out), ehola impi ebheke kumjaho werekhodi, kodwa amaProteas ezimisele ngokunqoba, noma kungafika kwi-session yokugcina kumdlalo weTest omnandi.
“Awukho umdlalo weTest olula,” kusho uMaharaj. “Ikakhulukazi sibheke iSri Lanka ekhaya, i-wicket isingcono. Asiwabali amachwane inkukhu ingaka chamuseli, sibheke ukuyinqoba i-session yokugcina ngosuku lokugcina. Uma kukhona okuvela ekuseni, lokho kuzoba umvuzo wethu.”
Abbott strikes decisive blows to round off Proteas victory Bowlers prepared for hard toil on final day Rabada, Mendis go head to head in a clash of young titans Cook and Elgar combo starts to click Philander sets the tone before centurion Cook cashes in Sri Lanka battle conditions to stay in touch with Proteas De Kock and Philander hold key to big first innings Lakmal earns first day honours Bowling in partnerships key – Abbott Proteas look to end year on a high CSA congratulates Erasmus and De Kock on ICC awards